သူမကို အားကျပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အတိုင်းလိုက်မလုပ်ကြဖို့ ပရိတ်သတ်ကို ချစ်စဖွယ်သတိပေးလာတဲ့ မေမီကိုကို… – Shwe Nay Chi
သူမကို အားကျပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အတိုင်းလိုက်မလုပ်ကြဖို့ ပရိတ်သတ်ကို ချစ်စဖွယ်သတိပေးလာတဲ့ မေမီကိုကို…
MRTV-4 မင်းသမီးလေး မေမီကိုကိုကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေများစွာရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုအားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးမို အထူး တလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်..။
ချစ်စရာကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတာမို ပရိသ တ်တွေအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ မေမီလေးကတော့ ချစ်သူလေးနဲ့ အချစ်ရေးမှာအဆင်ပြေနေလို လူတိုင်းကအားကျနေရတဲ့ မင်း သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်.
ချစ်စရာအပြုံလေးတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်းကိုစွဲဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်နေတဲ့ မေမီကိကိုကတော့ အရမ်းကိုအချစ်ခံနေရသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းနွဲဆိုးဆိုးတတ်သူလေး ဖြစ်နေတယ်လိုလည်း
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့အင်တာဗျုးမှာဖြေပေးပါသေးတယ်နော်.. ခုတစ်လောမှာ MRTV-4 မှာ ပြန်လွှင့်နေတဲ့ ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ မြိုင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်လွန်းတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကိုအားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
သူမကတော့ ဒီနေ့လေးမှာ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို သူမက တော့ ” အားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးမွချိပါနော်.. မြိုင့်ကိုအားကျပြီး သိန်း ၂၀ နဲ့ယောက်ျားဝယ်ဖို မစဉ်းစားကြပါနဲ့ အ ဆုံးမကောင်းဘူးနော်. ဆိုပြီး
အမှာစကားလေးတစ်ခွန်းကို ချစ်စရာကောင်းအောင် စနောက် ပြီး မှာထားခဲ့ပါတယ်နော်.. ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ မေမီကိုကို ကို ပရိသတ်ကြီးကလည်း ချစ်ရာစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်နဲ့ အားပေးစကားလေး ပြောပေးကြပါအုံးနော်…
ချစ်စရာအပြုံလေးတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်းကိုစွဲဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်နေတဲ့ မေမီကိကိုကတော့ အရမ်းကိုအချစ်ခံနေရသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းနွဲဆိုးဆိုးတတ်သူလေး ဖြစ်နေတယ်လိုလည်းသူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့အင်တာဗျုးမှာဖြေပေးပါသေးတယ်နော်..
ခုတစ်လောမှာ MRTV-4 မှာ ပြန်လွှင့်နေတဲ့ ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ မြိုင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်လွန်းတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကိုအားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးခဲ့စဥ်က အပြင်မှာပါ တကယ်ထိခိုက်ပြီး ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အခြေအနေကို ပြသလာတဲ့မြတ်သူသူ